Semalt SEO ကျွမ်းကျင်သူသည်သင်၏ Backlinks အလုပ်မလုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုရှင်းပြသည်
အင်တာနက်တစ်ခုလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်အချိတ်အဆက်များစုဆောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ "World Wide Web" ဟူသောဝေါဟာရသည်အမျိုးမျိုးသောဆိုဒ်များသည် link များမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ site တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်သောအခါ link တစ်ခုလုပ်သည်။
Backlinks များသည် site တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့ ဦး တည်သော link များဖြစ်သည်။ link ကိုထားရှိရာ site ကိုအဘို့, သူကအထွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကို ဦး ဆောင်သည့် site အတွက်၎င်းသည် ၀ င်လာလိမ့်မည်။
တူညီသော site ရှိအခြားစာမျက်နှာများသို့ပို့ဆောင်သော link များကို internal link ဟုခေါ်သည်။ ဤလင့်ခ်များသည် SEO အတွက်လည်းအရေးကြီးသော်လည်း၎င်း၏သက်ရောက်မှုသည်ပြင်ပလင့်များရှိနေခြင်းကဲ့သို့အရေးမကြီးပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေးတွင် Backlink များသည်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် backlink များပါ ၀ င်သော site ကိုအခြားသူများထက်လူကြိုက်များသည်။ ထို့ကြောင့် search engine များက၎င်းကိုအဆင့်မြင့်သည်။
Backlink များသည်ရရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုရရှိသောဆိုဒ်များမှာခိုင်မာသောရာထူးများရှိပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ဘယ်အလှည့်စေပါတယ် ပစ်မှတ်ထားအသွားအလာ၏ဆွဲဆောင်မှု။
SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်ကြောင့် backlink များသည်အရေးကြီးသနည်း
SEO နှင့်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးအားလုံးနီးပါးသည် backlinks နှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်သင်အလွယ်တကူသတိပြုမိနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးရတာလဲ။ ဂူဂဲလ်မှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုတည်ထောင်သူများသည်ဆိုက်များ၏အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ထူးခြားသည့် algorithm ကိုတီထွင်သောအခါ backlink ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့သည်။
ဤသည် algorithm ကို backlinks ၏တည်ရှိမှုနှင့်သော့ချက်အချက်များတစ် ဦး အဖြစ်၎င်း၏နံပါတ်ရေတွက်ပါဝင်သည်။ backlinks များများက site တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။
တကယ်တော့ဒီအတွေးအခေါ်ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ ယုတ္တိရှိပါသည်။ မည်သည့် site ကိုမဆိုတက်ကြွစွာချိတ်ဆက်ထားပါကဤ site သည်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် webmaster များနှင့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းသို့မဟုတ်ထို site အတွက်၎င်းတို့၏လင့်များဖြင့်မဲပေးရန်ပုံရသည်။ ဤသည် algorithm ကိုရှာဖွေရေးအရည်အသွေးတိုးတက်ခဲ့သည်။
သို့သော် webmasters များသည်အလွန်လျင်မြန်စွာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိမည်သည့် site ကိုမဆိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အဘယ်သို့နည်း အမြောက်အများအတွက်လင့်များဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်။ ထို့အပြင် backlinks များ၏အရင်းအမြစ်များကိုမကြာခဏအလွန်နိမ့်အရည်အသွေးမြင့်က်ဘ်ဆိုက်များ, အဓိကအားဖြင့် link ကိုအလှူရှင်များအဖြစ်အစေခံရန်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
တုံ့ပြန်မှုအရ Google နှင့်အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် algorithm ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အချိတ်အဆက်များအလုပ်ရပ်တန့်နေသည်ဟူသောကောလဟာလများပင်ရှိခဲ့သည်။ ဒါအမှန်ပဲလား။
ဟုတ်ပါတယ်, algorithm ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဖျက်သိမ်းမ! အပြောင်းအလဲများသာ backlinks ၏အရင်းအမြစ်ကိုသက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ ပထမအဆင့်တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သူတို့၏အရည်အသွေးကိုဂရုမစိုက်ဘဲ backlink အရေအတွက်သာလျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါကယနေ့အခြေအနေသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကအရေအတွက်ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။
Backlink များသည်မြှင့်တင်ရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။ နှင့်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ လေ့လာခဲ့သညျ့လေ့လာမှုအားလုံးအရယှဉ်ပြိုင်မှုနယ်ပယ်များတွင် (နှင့်ဤသည်မှာစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများအားလုံးနီးပါး) တွင်ထိပ်တန်းရာထူးများ၌ပေါ်လာသည့်ဆိုဒ်များသည်အာဏာရှိသည့်ရင်းမြစ်များမှခိုင်မာသောနောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများရရှိထားသူများဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကို backlinks ကောင်းသောစဉ်းစားနေကြသည်
site အဆင့်များအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည့်အရည်အသွေးမြင့် backlink များသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
nofollow attribute မရှိပါ။
အကြောင်းအရာတခုအတွက်ကျောက်ဆူးတစ်ခု (သင်ဆိုဒ်သို့သင်သွားသည့်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစု) ရှိသည်။
link ကို ဦး ဆောင်သောရန်ရည်ရွယ်ထားစာမျက်နှာကိုက်ညီသောဘာသာရပ်စာသားထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာကို backlinks substandard စဉ်းစားနေကြသည်:
မေးခွန်းထုတ်စရာအကြောင်းအရာများ၏ဆိုဒ်များမှ link များ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောလင့်ခ်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကမကြာခဏ (သို့မဟုတ် ပို၍ ပင်မကြာခဏ) ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလျစ်လျူရှုထားမည်ဖြစ်သော်လည်းထိုအဆက်အသွယ်များအလွဲသုံးစားမှုသည်အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောလင့်ခ်များကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။
အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခြင်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများ ဖန်တီး၍ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များကိုကမ်းလှမ်းပါ။
အမျိုးမျိုးသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖန်တီးခြင်း၊ သင်စိတ်ဝင်စားသော site ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့် link တစ်ခုရရန်အတွက် site ပိုင်ရှင်နှင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ခြင်း။
အမျိုးမျိုးသောသတင်းနယ်ပယ်များဖန်တီးခြင်း၊ သတင်းထောက်၏ဖိတ်ကြားမှုနှင့်သင်၏ကွန်ရက်ပေါ်ရှိထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးတွင် link တစ်ခုထည့်ရန်တောင်းဆိုခြင်း။
ဤရွေ့ကား, သငျသညျအခမဲ့လင့်ခ်ရရှိရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ပဲ, တဖန်, တီထွင်ဖန်တီးမှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်!
ခက်ခဲစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းရသောရလဒ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်အားလုံးသည် site ပိုင်ရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအခြေခံသောကြောင့်၊ သင်ကသူတို့ကိုသင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆွဲဆောင်သည်။
လက်ခံရရှိထားသော link အားလုံးသည်အသုံးပြုသူများအတွက် ၁၀၀% အသုံးဝင်ပြီး ၁၀၀% နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကဆိုက်ပိုင်ရှင်သည်သင့်အားချိတ်ဆက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အလွန်လေးနက်သောတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော link တစ်ခုသင်ရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိပြီး၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်၊ ဒီဟာကသင့်ရဲ့အရေးကြီးမှုကိုထပ်မံတိုးပွားစေလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသာရှိသည်။ အချိတ်အဆက်များ ၀ ယ်ပါသို့မဟုတ်မ ၀ ယ်ပါနှင့်။ နောက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်ငွေစုရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို၊ အဓိကအရာမှာဖန်တီးမှုဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အဓိကကျသည့်စည်းမျဉ်းမှာ - သင်ကူညီရန်လိုအပ်သည်။
လင့်ခ်များ ၀ ယ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ -
ဆိုဒ်များကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်လေ့လာရန်အတွက်ကိရိယာများစွာလိုအပ်သည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုမသိရတဲ့အတွက်အချိတ်အဆက်တွေ ၀ ယ်ထားတာဖြစ်တယ်။
ရှုပ်ထွေးလှသည့်အလှူရှင်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ အနိမ့်လင့်ခ်ကုန်ကျမှုနည်းသောဆိုဒ်များမှာ“ spam” များဖြစ်သည်။ link သတင်းတစ်ခုအတွက်အရည်အသွေးသတင်းသတင်းအရင်းအမြစ်များသည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်။
အဓိကအားသာချက် - မှန်ကန်သောအလုပ်ဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ရလဒ်များရနိုင်သည်။
အချိတ်အဆက်တွေရဖို့အချိန်နည်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဘယ်သူ့ကိုမှညှိနှိုင်းစရာမလိုဘဲဘာမှမဖန်တီးစရာမလိုပါ။ Paid ပိုက်ဆံ=ချက်ချင်းနီးပါးရလဒ်ရတယ်။
သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာကောအသို့နည်း။ လင့်ခ်များရရှိရန်အတွက်ပေးဆောင်ရမည့်ရွေးစရာမှာ link နှင့်ဆောင်းပါးများကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Backlink များသည်အလုပ်မလုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း
site သည်ကားတစ်စီးဖြစ်ပါက backlinks သည်၎င်း၏လောင်စာဖြစ်သည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အရာအားလုံးသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြည်တွင်း၌ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားလေလေ၊ backlink များ၏ကုန်ကျစရိတ်နည်းလေလေဖြစ်သည်။
ဒါဟာတကယ်တော့ပဲ ထို့ကြောင့် optimization အတွက်အနည်းဆုံးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း -
စာသား၏ပထမ ဦး ဆုံး 200 စကားလုံးများကို
1-3% ပိုကောင်းအောင်, သော့နှင့် spam မလုပ်ပါနဲ့
ပေါင်မုန့်အစအနများ + မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများရှိနေခြင်း
၎င်းသည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့အကြောင်းပြချက်များကြောင့် SEO တော်တော်များများသည်ထို site ရှိအရာအားလုံးကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးပါ။
အရာမကြာခဏကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး
ဒါကြောင့် backlink တွေကိုမချခင်၊ site ကိုအရင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။
အဓိကအချက်: ကောင်းမွန်သော internal optimization သည် site အသစ်တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးမြှင့်တင်ပေးပြီး backlinks ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲသက်သာစေသည်။ ပိုကောင်းတဲ့အတွင်းပိုင်း optimization ပိုကောင်းနှင့် backlinks ရဲ့ဘတ်ဂျက်နိမ့်သည်။
ဘလော့ဂ်တွင်ကျောက်ဆူးစာရင်း၊ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် unanchored link ၏ပရိုဖိုင်းပုံတို့အကြောင်းတစ်ကြိမ်ထက်မကဖော်ပြထားသည်။
အားလုံးအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် Google အတွက်, anchor text သည် filtering အတွက် site တစ်ခုတင်ရန်အားကြီးသော signal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲကျောက်ချစာသားထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ထားလျှင်သို့မဟုတ် link တစ်ခုလုံး၏ပရိုဖိုင်းသည်သဘာဝကျပုံမပေါ်ပါက၎င်းသည်အသွားအလာကိုဆုံးရှုံးရန်သို့မဟုတ်လုံးဝမရရန်ဖြစ်သည်။
Google ကသဘာဝတရားကိုနှစ်သက်တယ် ဒါဟာတကယ်တော့ပဲ!
ဒိုင်းနမစ်ကိုအမြဲတမ်းခန့်မှန်းပါ - မည်သည့်အချိန်ကာလနှင့်မည်သည့်ချိတ်ဆက်မှုအားမည်သည့်နေရာတွင်ထားမည်၊
ထိုကဲ့သို့သော TK link ကိုဆောက်သို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာမှထားရန်။
၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုအမှုအရာတို့ကိုအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည် မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်ကိုအာမခံရန် SEO ကျွမ်းကျင်သူများ။
သို့မဟုတ်ဆိုက်သည် backlink များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ပြစ်ဒဏ်များကိုရရှိသွားတဲ့;
ထို့ကြောင့်၊ link များမထည့်မှီ
ပထမ ဦး စွာကျနော်တို့နယ်ပယ်အားဖြင့်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်;
အဓိကအချက်: အသေးစိတ်ကိုအစပိုင်းတွင်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျောက်ချစခန်းတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ အချိန်ပို့စ်တင်ပြီးဖြန့်ဝေ။ ပြီးတော့သာ backlinks ထည့်ပါ။
ပြိုင်ဘက်နယ်ပယ်အတွက်အနည်းငယ် backlinks ရှိသည်ဖြစ်။ ,
ထို့နောက်သူက Google ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး site ကိုထိပ်ဆုံးသို့မတင်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင်ဒိုင်းနမစ်သည် backlink အမျိုးအစားများအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။
အဓိကစာမျက်နှာများမှ link များ၏ဒိုင်းနမစ်များသောအားဖြင့်အလွန်နှေးကွေးနေ;
အဓိကနှင့်မှတ်ချက်များအကြားအလယ်၌တစ်နေရာရာ guest ည့်သည်ပို့စ်များကိုအသုံးပြုပုံ;
ပင်မစာမျက်နှာမှ linking ။
Google မှကျပန်းစာရွက်စာတမ်းများ Algorithm
algorithm အကြောင်းအကျဉ်းချုပ် -
ဤမူပိုင်ခွင့်အရ၊ ဤကျဆင်းမှုပြီးနောက်နောက်ထပ်ရက် ၂၀ အတွင်းဘာမျှမလုပ်ရ။ သင်၏ site သည် Google ၏သေနတ်အောက်တွင်ရှိသောကြောင့်။
လူအနည်းငယ်ကဒီ algorithm ကိုသိ, ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်သူတို့များသောအားဖြင့် backlinks တည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်။ ရလဒ်အနေဖြင့် site သည်မကြီးထွားသေးပါ။
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ၄ င်းတို့၏အရည်အသွေး
တကယ့်စွန့်စားရမှုက backlink (၁) မျိုးသာသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်
ဆောင်းပါးများရှိလင့်ခ်များ (guest ည့်သည်တင်ခြင်း၊ အဝေးရောက်)
ကိုးကားချက်များ (ဒေသဆိုင်ရာ SEO အတွက်၊ သို့သော်မက)=လမ်းညွှန်များ
လူမှုဆက်သွယ်မှုများ (Reddit, Facebook၊ Google +, Twitter)
site တစ်ခုသို့ link mass တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ link အမျိုးအစားများကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ရဲ့ link ကို၏ပရိုဖိုင်းကိုသဘာဝကြည့်ရှုစေရန်။
အဓိကအချက်: link အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆောက်ရန် link တစ်ခုသာတစ်ခုတည်းကိုမသုံးပါနှင့်။ ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သောအခါအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်ယာဉ်အသွားအလာကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ထို site မှထွက်ခွာသွားပါကထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကိုသာတိုက်ရိုက်ကျောက်ဆူး, PBN ကနေလင့်များသာပုံမှန်ဒိုင်းနမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ၏ RF တောင်းဆိုချက်အရချက်ချင်းပင် TOP3သို့ချက်ချင်းသွားခဲ့သည်။
ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံတွင်၎င်းသည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည် -
ဒိုင်းနမစ်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ;
site ၏ကြီးထွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောကျပန်း algorithm ကိုသိရှိခြင်း၊
link ရဲ့ profile ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရောနှောပြီး ၄ င်းကိုသဘာဝကျအောင်လုပ်တယ်။
Backlinks နေဆဲများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည် SEO optimization နှင့်မြှင့်တင်ရေး။ သို့သော်လင့်ခ်များသည်အရည်အသွေးကောင်းရရန်နှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုဒ်များမှဖြစ်သင့်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထိပ်ဆုံးသို့အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၏အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်မှာအဓိကအားဖြင့်အချက်နှစ်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်းနှင့်နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများရယူခြင်း။ ဤအခြေအနေနှစ်ခုကိုတွေ့သောအခါသင်၏ site သည်ထိပ်ကိုရောက်ရန်လိုအပ်သောမြှင့်တင်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။